Soosaarida & Xakameynta Tayada - Huai 'Qalabka Caafimaadka ee Hongyu Co., Ltd.
Qeybaha wax soo saarka ayaa hada ah:
1. Qaybta wax soo saarka caafimaadka ee Hongyu waxay dabooshaa aalado qalliin balaastig ah, aalado qalliin indhaha lagu sameeyo, aaladaha microsurgical, qolka qalliinka neerfaha, iwm.
2. Shirkadda waxay muhiimad weyn siineysaa shaqada soosaarka cusub ee wax soo saarka, waxayna sameyneysaa qorshe shaqo oo horumarineed oo cusub oo wax soo saar, waxayna ku dadaalaysaa sidii loo gaari lahaa waxsoosaarka iyo howlgalka jiilka koowaad ee wax soo saarka isla waqtigaas, si firfircoonna u horumariyo jiilka labaad , cilmi baaris jiilka saddexaad, fikirka jiilka afraad, si loo hubiyo inuu jiro suuq cusub oo wax soo saar oo joogto ah, sidaa darteed shirkadaha ku jira wax soo saarka iyo geedi socodka hawlgalka oo dhan si ay u ilaashadaan muhiimad xoog leh, oo ay had iyo goor raadiyaan horumar.
Tayada wanaagsan ee sheyga ayaa ka muuqata:
Teknolojiyada wax soo saarka, min mashiinka, duriinta mudista, shaambada, birta xaashiyaha, alxamida kulanka, tijaabinta, waxay leeyihiin nidaam dhammaystiran. Iyada oo leh qalab kontorool oo lambar koowaad ah oo guriga ah, qalabka wax lagu dhisayo iyo qalabka tijaabinta, oo leh awoodo adag oo wax soo saar ah.
Waaxda kormeerka tayada ee shirkaddu waxay mas'uul ka tahay dhammaan shaqaalaha warshadda "tayada waa nolosha" sumcadda iyo aqoonta, kormeerka iyo kormeerka heerarka tayada, hubinta tayada badeecada, sameynta iyo hagaajinta dhammaan noocyada qiimeynta, tirakoobka, shaqada falanqaynta.
Dhaqangelinta adag ee "is-kormeerka, kormeerka labada, kormeerka gaarka ah" nidaamka, si wax looga qabto dhibaatooyinka tayada ee soo-saarka wax soo saarka, sheyga labaad waa inuu iska diiwaangaliyaa kormeeraha tayada ee la saxiixay ka hor aqoon isweydaarsiga, si looga hortago qashinka galay geedi socodka xiga . Qashinka waa in lagu fuliyaa si loogu caawiyo aqoon isweydaarsiga si loo caddeeyo sababta, loo qaado tallaabooyin horumarineed, shaqo wanaagsan laga sameeyo diiwaangelinta shilalka, daaweynta, falanqaynta.
Falanqaynta joogtada ah iyo daraasadda, si loo xalliyo tayada geeddi-socodka, la fahmo hirgelinta shaqada, si loo hubiyo in badeecadaha shirkadda soo gashaa suuqa ay u qalmaan 100%.